Akaunti Yangu Yekuchengetedzwa Yakave Yakakanganiswa Pa Twitter? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 558
Iyo Twitter Mushandisi inogona kutarisa kana Kuchengetedzwa kwake Akaunzi yakagadziriswa, paunenge uchiona zvinotevera: Unoona maTweets akazvimirira akatumirwa neAccount yako, unoona zvisina kurongwa Meseji Dzakatumirwa kubva kuAccount yako
Mushandisi inoona zviitiko yakaitwa neAccount yako: Maitiro ekutevera, kusatevera, bhuroka, nezvimwe. iwe unogashira zviziviso kubva kuTwitter zvichitaura kuti yako Akaundi Chengetedzo inogona Kukanganiswa, kuti ruzivo rweAccount yako rwachinja uye haasi iye akachinja.
Mushandisi anoziva kuti yake password haichashandi uye, iyo Twitter chikuva, inokumbira iwe kuti udzorere. Mupfungwa iyi, Mushandisi anoda maTwitter maitiro ekuzadza Akaunti yake uye nekuichengetedza.
Matanho Ekudzosera Kuchengetedzwa kweAkaunti yangu yeTwitter
Nhanho dzinofanirwa kuteedzerwa neTwitter Mushandisi Dzorerazve Kuchengeteka yeAkaunti yako yeTwitter: Chinja password yako nekukasira, kumbira password yekumisazve papuratifomu ye Twitter.
Mushandisi anofanira kuona kuti yake email kero Iva nechokwadi, unogona kuzvichinja kubva kuTwitter iOS kana Android application kana nekupinda mu twitter.com; kuwedzera kubatana kweyechitatu-bato maapplication ausingazive nezvawo.
Uye zvakare, Mushandisi anofanira gadziridza password yako mune yechitatu-bato kunyorera iwe waunovimba; sezvo Akaunti yako ichifumurwa kuvharirwa kwechinguva neiyo Twitter chikuva semhedzisiro yekukundikana kwekuedza kwekuedza.
TAURA KUSHANDISWA PANE TWITTER
Mune social network pane dzimwe nguva maitiro izvo zviri kunze kweMitemo neMitemo ye Twitter, izvo zvinogumbura uye zvinokanganisa kutaurirana chaiko pakati peTwitter. Aya mafungire haanyatsoita mamiriro ekushungurudzwa.
Kana iyo Twitter Mushandisi inogamuchira Direct Meseji kana Kunyanyisa kutaurirana yeAccounts Anonyomba, iwe unogona kuita zvinotevera: Mira kuitevera uye gumisa chero mhando yekutaurirana neakaunzi Akaundi; nenzira iyi, akadaro Akaunti icharasikirwa nechido kana ikasatariswa zvachose.
Kana iwo mafungiro eiyo Nhoroondo Yakashata inoenderera mberi, Mushandisi anokurudzirwa kuivhara, nekudaro ichivatadzisa kukutevera, kana kuona yako Mbiri yemufananidzo pane yako Mbiri peji kana mune yako timeline; nenzira iyi, mhinduro dzako kana kutaurwa hazvingaratidzike mune yako Notabhu tab.
Ini ndinogamuchira kutyisidzirwa pa Twitter
Mune yemagariro network Twitter inoitika zvishoma zvese, nekuti zvinosangana zvikuru Vashandi huwandu pasirese vane maitiro akasiyana nezviito zvinogona kukanganisa, zvakanaka kana zvisina kunaka, kutyisidzirwa kwevanhu vanofamba nenzira yeTwitter.
Mushandisi, kana akagamuchira Zvinotyisa yemhando ipi neipi uye iwe uchifunga kuti hunhu hwako huri panjodzi, unofanirwa kubata Dhipatimendi reMapurisa; mune ino kesi: Nyora Iwo Anotambudza kana ane mhirizhonga Meseji iwe wawakawana panguva yako yekugara paTwitter network.
Izvo zvakakosha kuti Mushandisi kugovera zvese zvinogona kuitika maererano neanogona kufungidzirwa avo vakaratidza hunhu hwakanyanya mune imwe netiweki yekutandarira; zvakare ipa ruzivo rwakanangana nekutyisidzira kwakapfuura kwakagamuchirwa.
1 Matanho Ekudzosera Kuchengetedzwa kweAkaunti yangu yeTwitter
2 TAURA KUSHANDISWA PANE TWITTER
3 Ini ndinogamuchira kutyisidzirwa pa Twitter